Akụziri gị a ole na ole aghụghọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-ihe mgbapụta ala - China Qingdao CO-NELE Group
Akụziri gị a ole na ole aghụghọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-ihe mgbapụta ala
Mgbe anwụrụ a na-tọrọ ala, mgbe ọchịchọ nke ihe mgbapụta piping bụ nnukwu, na ihe nwere ike igba n'ala ruru ya nke ibu na-achọ pipeline, na-eme a adabaghi na-erute anwụrụ ma ọ bụ na-eme ihe na-segregated n'ihi na onwe-eru, si otú eme ka erute anwụrụ ka clogged. Iji zere nke a, ndị na-esonụ jikoro nwere ike iwere:
1. Mgbe pumping ihe ala, onwe onye na-eruba nke ihe nwere njikọ chiri anya ya slump. Mmiri ga-pumped tupu pumping ihe, elele nkwonkwo ọ bụla anwụrụ iji hụ na akara adịghị seep mmiri, na mgbe ahụ imipu na ngwa agha ịtụ anwụrụ ma n'otu oge The ikuku atara.
2. Mgbe ndị na nchepụta nke piping dị ukwuu karịa 4 Celsius -7 Celsius, a kwụ anwụrụ kwekọrọ a ogologo karịa 5 ugboro nke vetikal dobe kwesịrị nyere na n'ihu ọgwụgwụ nke downwardly chọrọ ọjà, na self- asọpụta nke ihe nwere ike isi gbochie site frictional eguzogide.
Qingdao ihe mgbapụta ụgbọala price (4)
3. Mgbe anwụrụ nchepụta dị ukwuu karịa 7 Celsius -12 Celsius, na mgbakwunye na nke kwụ anwụrụ nke 5 ugboro ogologo set na n'ihu ọgwụgwụ nke mmasị ọjà, ihe iyuzucha valvụ kwesịrị nyere na elu njedebe nke ala ọjà. N'oge pumping usoro, ma ọ bụrụ na e nwere a oghere na-achọ pipeline, iyuzucha valvụ kwesịrị-emeghere mbụ ruo mgbe mmasị pipeline jupụtara ihe, na mgbe iyuzucha valvụ ọtọde na ngwa agha, iyuzucha valvụ a na-emechi na nkịtị pumping na rụrụ .
4. The n'ala anwụrụ na a nnukwu dobe nwere ike arụnyere na center nke ekwesị n'ala anwụrụ iji wụnye a stop anwụrụ na-eme dị ka a breeki. Fanye ọtụtụ ike ogbo bọọlụ ma ọ bụ nhicha plọg tupu pumping na ngwa agha zere ọnwụ nke ngwa agha. Ha nwere ike jide arọ nke ngwa agha.
5. Mgbe nanị site na saịtị ahụ ọnọdụ, mgbe e nwere ezughị ohere ndokwa kwụ anwụrụ na n'ihu ọgwụgwụ nke n'ala chọrọ ọjà, sooks, n'ikpere aka ma ọ bụ annular anwụrụ ike ga-eji kama dịkwuo frictional-eguzogide ma na-egbochi ihe si eru n'ala na anwụrụ ngalaba.
Qingdao ihe mgbapụta ụgbọala price (6)
Otú ọ dị, n'agbanyeghị ma ihe mgbapụta jikọọ elu ma ọ bụ ala, na kwụ akakabarede ogologo nke dị iche iche ọjà, na n'ezie piping, n'ihi na dị iche iche iche-iche, nọmba na ọdịdị ala nke ọjà, n'ezie erute anya na ịdị elu na-dị iche iche, nke bụ adaba n'ihi na ngụkọta oge. Dochie conical tube, n'ikpere aka, na sooks, elu vetikal tube, ala vetikal tube, wdg n'ime kwụ n'ogologo. N'otu oge, ndị kwụ ajụjụ uru a na-metụtara ihe e ji mara, anwụrụ n'obosara na na.
Post oge: Nov-21-2019